Shimon Peres qof noocee ah ayuu ahaa? - BBC News Somali
Shimon Peres qof noocee ah ayuu ahaa?
Image caption Shimon Peres waxaa loo arkaa in uu ka mid ahaa aasaasayaashii Israel
Shimon Peres oo ahaa Siyaasiga rug caddaaga ah ee reer Israa'iil isla markaana hadda ka hor ku guuleystay billadda nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa geeriyooday. Peres ayaa da'diisu ahayd 93 sano, waxaana la dhigay cusbitalka labo usbuuc ka hor, xilligaasi oo uu soo ritay xanuunka faaligga.
Shimon Peres ayaa waxa uu ka mid ahaa jiilkii ugu dambeeyay ee siyaasiinta Israa'iil ee u soo joogay aasaaskii Israa'iil sanadkii 1948-kii.
Ra'iisal Wasaraaha Isarel, Benjamin Netanyahu, ayaa ku tilmaamay in uu ahaa nin nabadeed.
Sanaddadii ugu horreeyay, waxa Peres loo arkayay dagaal ooge balse 1990-meeyadii waxa uu door muhiim ah ka qaatay heshiis siyaasadeed oo israa'iil ay la gashay Falastiyiniinta.
Shimon Peres wuxu ahaa mid ka mid ah rukunnada siyaasadda Israel ilaa dhalashadii dalkaas sannadkii 1948. Wuxu soo qabtay xilal badan oo dawladeed oo uu ka mid ahaa xilka ra'isal wasaarenimo.
Peres wuxu bishii August sannadkii 1923 ku dhashay magaalada Fishiniyeva oo ka horay uga tirsanayd dalka Poland haddase ka mid ah Belaruss oo aabihii ka ahaa ganacsade ka baayac mushtara looxa, magaciisii asalka ahaana wuxu ahaa Simon Berisky.
Image caption Peres, Yitzhak Rabin iyo Yaasir Carafaat waxaa si wada jir ah loo guddoonsiiyay abaalmarinta caalamiga ah ee nabdda ee Nobel Peace Prize
Falastiin ayay u guureen
Peres aabihii ma ahayn yuhuudi maro ku dheg ah, hase yaashee Shimon waxa yaraantiisii Talmuudka ku ababiyay awowgii oo wuxu markii dambe noqday nin diinta ku dheggan.
Sannadkii 1934 ayaa qoyskoodu u guuray Falastiin oo markaa ku jirtay gacanta boqortooyada Ingiriiska oo ay ugu yimaadeen aabihii oo laba sannadood ka sii horeeyay, waxaana qoyskoodu degeen magaalada Telaviv.
Peres wuxu ka baxay dugsiga beeraha waxaanu ka shaqeeyay mashaariicdii beeraha ee la oran jiray Kabutz, ka dibna isagoo 18 jir ah ayuu ku biiray siyaasadda waxaana loo magacaabay xog-hayaha dhaqdhaqaaqii Sahyuuniyadda Caalamiga ah.
Sannadkii 1947 ayaa ra'isal wasaarihii u horeeyay ee Israel, David Ben Gurion, wuxu Peres u magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiskii soo iibinta hubka ee loogu talo galay maleeshiyaadkii Yuhuudda ahaa ee la oran jiray Haggana oo markii dambe noqday aasaaskii ciidanka Israel.
Peres wuxu markii dambe ku guulaystay bilowga dhismaha mashruucii sirta ahaa ee warshadda nukliyeerka ah ee Daymuuna iyo heshiisyo uu la galay Faransiiska oo diyaarado casri ah ka iibiyay Israel.
Image caption wuxuu u ololeyn jiray in heshiis laga gaaro arrinta Daanta Galbeed
Baarlamaanka loo doortay
Sannadkii 1959, Peres waxa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Israel ee Knesset ka loo yaqaan waxaanu ka soo baxay xisbigii la oran jiray Maabay oo ahaa kii markii dambe dhalay dhaqdhaqaaqa cusub ee Cilmaaniyadda Israel. Waxaana isla sannadkaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka gaashaan dhigga.
Wuxu xilka iska casilay sannadkii 65 ka dib markii baaritaan la bilaabay farta ku fiiqay inuu ku lug lahaa hawgalkii loogu magac daray Suzana oo ahaa mid ay Israel ku doonaysay sanadkii 54 kii inay ku qarxiso xarumo Ingiriiska iyo Maraykanku ku lahaayeen Masar.
Danta ay ka lahaydna ahayd in aan Ingiriisku kala bixin ciidamadiisa jasiirada Sinai, hase ahaatee gabagabadii baaritaanka waxa lagu ogaaday in aanay jirin caddaymo muujinaya inuu hawlgalkaa ku lug lahaa waxaanay taasi keentay in markii dambe Peres iyo Ben Gurion ay ka baxaan Maabay oo ay xisbi cusub aasaasaan.
Ra'iisal wasaare ayuu noqday
Ka dib markii ay is casishay ra'isal wasaarihii Israel, Golda Meir, sannadkii 1974 dagaalkii lixdii Oktoobar ee ay Masar isku dhaceen ka dib, ayaa Peres wuxu xilka ra'isal wasaaranimo kula tartamay Yitzak Rabin oo kaga guulaystay tartankaa.
Sannadkii 1977 kii oo ay soo food saartay fadeexad maaliyadeed oo loo haystay xaaskiisa ayay qasab ku noqotay inuu iska casilo xilka ra'isal wasaarenimo, hase yeeshee gol daloolo uu lahaa dastuurku ayuu kaga badbaaday inuu xilka ka tago.
Peres wuxu noqday hogaamiyaha xisbiga Labour-ka doorashooyinkii uu is bahaysigii xisbigaasi hogaaminayay kagaga adkaaday xisbiga Likud-ka oo uu hogaaminayay Menahim Began ka dib waxa uu noqday ra'sal wasaare.
Heshiiskii nabadda ee Oslo
Doorashadii 1992 ayaa Peres lagaga adkaaday xisbigii Labour ka ee ee uu hogaaminayay. Wuxu wasiirka arimaha dibadda ka noqday xukuumadii ra'isal wasaare Yitzak Rabin, waxanu wadahadallo qarsoodi ah la bilaabay hogaamiyihii hore ee Falastiin , Yasir Arafat, iyo ururkii xoraynta falastiin.
Wadahadalladaasi wuxuu isugu soo biyo shubteen heshiiskii nabadda ee Oslo lagu saxeexay 93 kii halkaas oo markii ugu horraysay ay dowladda Israel si rasmi ah ugu aqoonsatay hogaankii Falastiiniyiinta. Sannad ka dib waxa Peres iyo Yasir Arafat ay ku guulaysteen abaalmarinta Nobel ee nabadda.
Peres oo ahaa nin nabadeed ayaa markii dambe isku bedelay nin difaaca dhul ballaarsiga Israel ka waddo daanta galbeed ee la haysto, inkastoo uu ku baaqi jiray in ay tahay in Israel aqbasho xaqqa ay falastiiniyiintu u leeyihiin dhulka. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa inuu yiri " Falastiiniyiintu waa jaarka inoogu xiga waxaana ii muuqata inay noqon karaa saxiibadeenna ugu dhaw"
Sannadkii 95 markii la dilay ra'isal wasaarihii ka horeeyay ee Yitzak Rabin ka dib ayuu hadana noqday ra'isal wasaare, hase yeeshee isagoon muddo sannad ahi u buuxsamin ayaa waxaa doorasho kaga adkaaday Benyamin Netenyahu oo hogaaminayay xisbiga Likud.
2000 wuxu u tartamay xilka madaxweynenimada dalka, oo ah jago sharafeed, hase ahaatee waxa kaga guulaystay Moshi Katsav, 2002 markii Ehud Barak lagaga adkaaday doorashada ayuu Peres la wareegay hogaanka xisbiga Labour-ka wuxuna isbahaysi la galay Likud-ka waxuuna dawladdi Areil Sharon ka noqday wasiirka arrimaha dibadda.
Wuxau aad u taageeray Sharon oo uu kagaga hagoogtay kooxdii ka soo horjeeday ee diidanayd in ciidammada Israel laga soo saaro Gaza iyo qaybo ka mid ah daanta Galbeed. 2005-tii ayuu Peres iska casilay xisbiga Labour-ka waxuuna sheegay inuu taageersanyahay xisbi cusub oo Sharon aasaasay oo la oran jiray Kadima.
Bishii June ee isla sannadkaa waxa Peres loo doortay madaxweynaha Israel xilkaas oo uu hayay muddo todoba sannadood ah waxaanu markaa ahaa Peres madaxwaynaha ugu da'da wayn kuwa caalamka. slo